ဒေါ်လာ ၉၅.၃သန်းတန် ထီပေါက်သွားပြီဗျို့ Lotto | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ဒေါ်လာ ၉၅.၃သန်းတန် ထီပေါက်သွားပြီဗျို့ Lotto
ဒေါ်လာ ၉၅.၃သန်းတန် ထီပေါက်သွားပြီဗျို့ Lotto
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Dec 27, 2010 in Community & Society, Money & Finance, U.S. News |5comments
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၅.၃သန်းတန် ပါဝါဘောထီလက်မှတ် ပထမဆုကြီးကို အမေရိကန်နိုင်ငံ အရီဇိုးနားပြည်နယ်မှ အသက်၆၄နှစ်အရွယ် အစားထိုးအကူ ကျောင်းဆရာမဖြစ်သူ ဖို့မိုဟေ့ဗ်မြို့နေ ရှီလာဗာကီးဆိုသူက တဦးတည်း ဆွတ်ခူးရရှိသွားပါသည်။ သူမက ဆုကြေးငွေကို အကြိမ်ကြိမ်အလီလီ နှစ်ပေါင်းများစွာ ထုတ်ယူမည့်အစား ဒေါ်လာ၄၉.၉သန်းကို တလုံးတခဲထဲ ထုတ်ယူမှာဖြစ်ပြီး အပန်းဖြေ ခရီးသွားသုံး မော်တော်ယာဉ်ဝယ်မယ်၊ နိုင်ငံအနှံ့ခရီးထွက်ပါမယ်။
သူနဲ့သူ့၏ မိသားစုဝင်များ၊ မိတ်ဆွေများ အားလုံးရဲ့ ဘဝတွေ ပြောင်းလဲသွားတော့မယ်လို့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ၊ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးများ ဝန်းရံနေတဲ့ ကံထူးရှင်ဗာကီးက သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ တခုတွင်ပြောသည်။ ဒီဇင်ဘာလ ၁ရက်နေ့ ကထွက်တဲ့ ပထမဆုကိုပေါက်ဖို့ ရွေးပြီးသား နံပတ်တွဲတခုကိုပဲ အပတ်စဉ် နှစ်ပေါင်းများစွာ စွဲစွဲမြဲမြဲ ထိုးခဲ့တယ်လို့ ခလေးနှစ်ဦးနဲ့ မြေးငါးယောက်ရဲ့ ခင်ပွန်းမရှိ တကိုယ်တည်း အုပ်ထိန်းသူ ဗာကီးကပြောသည်။
ပေါက်ဂဏန်းတွဲလုံး ၅-၁၀-၁၁-၁၂-၂၀နဲ့ ပါဝါဘောနံပတ် ၂ ဟာ သူမနဲ့ ခလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ မွေးနေ့တွဲဂဏန်းများဖြစ်သည်။ ကျမဒီနံပါတ်တွေကိုပဲ ၆နှစ်ခွဲထက်မနဲ စွဲမြဲစွာထိုးခဲ့တယ်။ ငါ့မှာ အကြွေစေ့တွေပဲရှိရင်တောင် ထိုးဖြစ်အောင်ထိုးတယ်လို့ သတင်းထောက်များကိုပြောသည်။ ပေါက်မဲ ထီလက်မှတ်ကို ဖီးနစ်မြို့နဲ့ မိုင်၂၀၀လောက်ဝေးတဲ့ ဖို့မိုဟေ့ရှိ ဆေ့ဝေးစူပါမားကက်မှာ ဝယ်ခဲ့သည်။ သူမဟာ အရီဇိုးနားပြည်နယ်တွင် ပါဝါဘောထီဆုကြေး တတိယအများဆုံး ရသူဖြစ်သည်။ ပါဝါဘော ထီကို ၄၂ပြည်နယ်၊ ကိုလံဘီယာခရိုင်နဲ့ ယူအက်စ်ဗာဂျင်ကျွန်းစုတို့ နေသူများထိုးသည်။ သူမအတွက် ထီပေါက်ကိန်းကတော့ အကြိမ်ရေ ၁၉၅သန်းမှာ တကြိမ်သာသာလေးပဲ ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်လောက်ကထဲက တင်ဖို့ အဆင်မပြေတာနဲ့ အခုမှတင်လိုက်ရတာ ခွင့်လွှတ်ပါ။
PHOENIX (Reuters) – Ending nearly two weeks of suspense,a64-year-old substitute teacher and single parent from Arizona claimeda$95.3 million Powerball jackpot.
Sheila Verke,aFort Mohave resident, presented the single-winning ticket to lottery officials in Phoenix on Monday. She opted to takealump sum payment of $49.9 million, saying she plans to buyarecreational vehicle and travel the country.
ဗမာပြည်ကလူတွေ အားကျတော့မှာပဲ …
ပြည်တွင်းက မြန်မာတွေနှလုံးထီ .. ချဲ..မတွက်ကြပဲ.. ယူအက်စ်ထီနံပါတ်တွက်ပေးပါ ..ဆိုတာကို..
ပြည်တွင်းမှာ..ပေါက်ငွေ နည်းနည်းလေးနဲ့.. ဘ၀တခုလုံးရင်းပြီး ချနေသူတွေအများကြီး..။
ဒီမှာသာ .. သေသေချာချာတွက်ပြီးတင်လိုက်… သွားထိုးမဲ့သူတွေအများကြီး..
ပေါက်ရင် .. တ၀က်ပေးပါမယ်…ဆိုတာကိုနော..
သဂျီးကို ပြောသားဘဲ ၁၀ဖိုး ထိုးပေးလို့.. ပေါက်ရင် ပိုက်ဆံ ပြန်ပေးမယ် လို့.. အဟီး.. နောက်တာနော်.. ထီ မပြောနဲ့ ကံစမ်းမဲတောင် ကျေးဇူးတုန့်ပြန်တာဘဲ ခံရတယ်။ တနေ့က ဆို အိုကီ ဆပ်ပြာ အထုတ် ၃ထုတ် ၀ယ်လာခဲ့တယ် ၂ထုတ်က ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ၁ထုတ်က ၅၀၀ ကျပ် ပေါက်တယ်။ ၅၀၀ကျပ် ရေးထားတဲ့ စာရွက်က အပေါ်က တိတ်မှာ ပါသွားလို့ ၅၀၀ ပါ မရဘူး မြင်သာ မြင်ရ မခင်တွယ်ရတဲ့ ဘ၀ မို့.. ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု အပြည့်ရှိလို့.. ကံစမ်းတာ ထီထိုးတာ ဘာဘာညာညာ လုံးဝ စိတ်ကို မ၀င်စားဘူး။